Ny fitantanana fiara fitateram-bahoaka tsara indrindra ho an'ny fanofana fialan-tsasatra
Ny mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra sy ny mpandraharaha amin'ny serivisy dia matetika no miandraikitra ny fanofana trano marobe amin'ny toerana maro, lavitra avokoa. Midika izany fa mety ho sarotra ny mitazona an-tampon'ny zava-mitranga amin'ny trano tsirairay amin'ny fotoana tena izy. Ankoatr'izay, sarotra ny manara-maso ny lahasa isan-karazany izay mila karakarain'ireo mpiasa isan-karazany na orinasa avy any ivelany isaky ny singa.
Matetika, izany dia miteraka fahatongavan'ireo vahiny amin'ny trano iray fa tsy mbola nodiovina ilay toerana, na hoe tsy ampy ny satan'ny fahadiovana. Amin'ny tranga hafa, ny tompon-trano na ny mpiasan'izy ireo dia mety manadino ny mandefa ny torolàlana momba ny fidirana amin'ny vahiny momba ny fananana marina, miaraka amin'ny antsipiriany ampy, na amin'ny fotoana mety. Izany dia mety hiteraka tsy fahafaham-po be avy amin'ny vahininy, ary hiteraka tsikera ratsy.
Ny tatitra momba ny fikojakojana, ny fanarahana ary ny famahana, dia mety ho lasa aretin'andoha be koa satria mitombo ny isan'ny fananana tadiavinao. Matetika heverina ho toy ny ratsy ilaina, ny ankamaroan'ny mpampiantrano dia tsy manana rafitra ahafahana miantoka tsara ny fananan'izy ireo rehefa voatazona lavitra.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Operations Management Help manampy?
Zeevou Do dia mamela anao hamita ny asanao isan'andro hahafahanao mifantoka amin'izay zava-dehibe - mampitombo ny orinasanao. Amin'ny alàlan'ny famelana ny rafitray hikarakara ny fandaminana ny fanaraha-maso ataonao, ny fanamorana ny fisavana, ny fifandraisanao amin'ireo mpikarakara tokantranonao ary ny fampihenana ny asa takiana hitazomana ny fikojakojana ny fanananao, azonao atao ny manomboka mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fiasana amin'ny anao orinasa fa tsy ao anatiny. Ankoatr'izay, ny Kalandrien'ireo hetsika miovaova dia manaisotra ny filana mampiasa kalandrie ivelany toy ny Google Calendar manara-maso ireo lahasa iraisana na miverimberina.
Zeevou dia mamela anao Tantano lavitra ny check-in-nao. The fanodinana famandrihana mandeha ho azy miantoka fa nahavita ny dingana rehetra ilainao ny famandrihana mba hamafisina tanteraka ireo vahiny alohan'ny hamoahana ny torolàlana momba ny fisavana raha toa ka fizahana manokana izany. Noho izany, azonao antoka fa ny fandoavam-bola, ny petra-bola fiarovana, ny fanaovan-tsonia dizitaly ny fepetra sy fepetrao, ny fanangonana ID sy ny fanamarinana ny vahininao dia efa vita alohan'ny handefasana torolàlana momba ny fizahana tena. Ho tambin-karama, ny lisitry ny fidirana an-tserasera eto amintsika koa dia misambotra ny antsipirian'ny fifandraisan'ny vahiny sy ny fidirana an-tsokosoko mifanaraka amin'ny GDPR.
Raha maniry hihaona sy hiarahaba vahiny amin'ny fahatongavana ianao, na raha misy serivisy mpiambina eo amin'ny latabatra eo am-panaovana ny vahinin'ilay vahiny, dia azonao atao ny manampy ny mpiasanao havaozina hatrany momba ny fizahana izay ilain'izy ireo karakaraina. . Ireo karazana fisavana azo alaina dia azo alain'ny olona sy omena ambaratonga laharam-pahamehana, ary mety mihoatra ny haavon'ny famandrihana.
Zeevou Do dia afaka manamarika ny mpitsidika rehetra ho fizahana ho anao amin'ny daty fiaingana, na mamela anao hanao izany amin'ny tenanao. Fanaraha-maso an-tanana ireo vahiny amin'ny alàlan'ny lisitry ny fizahana ataonay, ahafahanao mahazo antoka fa vita ny famatsiam-bola ho an'ny vahiny. Ankoatr'izay, afaka manampy anao izy io hanaraka ny fiantohana fa afaka manara-maso ny fizahana fizahana amin'ny famandrihana rehetra izay tsapanao fa nahatafiditra vahiny tandindomin-doza ianao.
Zeevou efa mandroso manadio endri-javatra dia mamela anao ho mandeha ho azy feno ny fifandraisana ny vaovao amin'ny mpikarakara tokantrano. Ankoatry ny fahafahany mampahafantatra azy ireo raha vao misy famandrihana tonga na novaina, ny mpikarakara tokantrano dia afaka miditra amin'ny kalandrie famandrihana miaraka amin'ny fomba fijery voafetra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Internet na zanatany Android sy iOS (iPhone). Mobile Apps.
Ny rafitray dia mamokatra ho azy ny asa fanadinana an-trano sy any antonony ary manome izany ho an'ireo mpanadio na orinasa mpanadio avy any ivelany. Ankoatry ny fahafahany manara-maso ny fotoana sy ny toerana amin'ny alàlan'ny fampiharana, dia mamela ny mpikarakara trano hitatitra ihany koa ny olana momba ny fikojakojana, izay mihinana mivantana mankany amin'ny Zeevou Fix.
Zeevou Fix dia mamela anao hitazona ireo olana amin'ny fikojakojana anao amin'ny fanananao rehetra. Azonao atao ny manoratra hoe iza no nitory azy, ny haavon'ny fahamehana, ary koa mijery ireo sary na horonan-tsary mifandraika amin'ilay olana.
The fikarakarana Ny tatitra dia ahafahanao manivana ny olan'ny fikolokoloana amin'ny alàlan'ny dingana maro amin'ny famitana, mba hahazoana antoka fa afaka manatrika azy rehetra araka izay tratra ny ekipanao. Io dia ahafahanao manao laharam-pahamehana mifototra amin'ny haavon'ny fahamehana izay nomena ny asa tsirairay, ary koa ny halaviran'ny dingana azonao tamin'ny famahana izany.
Ny tetiandro hetsika natao dia ahafahanao mamorona hetsika iray na miverimberina, manampy mpiambina, mampifandray azy ireo amin'ny toe-javatra iray (toy ny fananana na singa iray), ary manampy fampahatsiahivana.
Ity endri-javatra ity dia mety ho tonga mora ampiasaina rehefa manandrana mitazona hatrany an-tampon'ny fanangonana fako isan-kerinandro, fanaraha-maso isam-bolana, na servisy boiler isan-taona na fanaraha-maso fiarovana entona / elektrika.
Raha, na inona na inona antony, mila manakana vondrona iray na maromaro ianao ary manakana azy ireo tsy hamidy, mamela anao hanao izany amin'ny fisintomana vitsivitsy monja ny fisorohana ny daty.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manara-maso ny karazana sakana sy ny anton'ny sakana. Ity log ity dia afaka manampy anao hanenjana ny antony mahatonga ny fahaverezan'ny fidiram-bola very ary hanampy anao hanatsara ny faran'ny orinasa amin'ny fotoana mety.